Shanta Siyaabood ee Naqshadeynta Jawaabta ah ayaa beddelaysa SEO | Martech Zone
Shanta Siyaabood ee Naqshadeynta Jawaabtu waxay beddeleysaa SEO
Naqshadeynta jawaabta ayaa ah heshiis weyn; heshiis weyn sida in Mashable ayaa ku ammaantay 2013 inay tahay "sanadkii naqshadeynta waxqabadka." Xirfadlayaasha websaydhka badankood way fahmayaan tan - naqshadeynta jawaabta waxay beddeleysaa habka internetka u muuqdo, dareemo, iyo u shaqeeyo.
Waxaa jira wax yar oo iska cad oo socda, in kastoo. Naqshadeynta jawaabta sidoo kale wuxuu badalaa SEO. Markii aan eegno wixii ka baxsan CSS ee nashqadeynta jawaabta leh, waxaan aragnaa isbeddel weyn oo ku yimid hababka raadinta ee raad ku leh raadinta moobaylka iyo desktop-ka labadaba.
Maxay yihiin arrimaha SEO ay keeneen imaatinka nashqadeynta waxqabadka? Waa kuwan shan.
1. Google wuxuu jecel yahay naqshadeynta jawaabta, taasoo la micno ah in natiijooyinka raadinta ay u badan tahay inay doorbidi doonaan bogagga shaqaaleeya hababka ugu fiican ee jawaabta.
In kasta oo aan ka warwareegno in aan si cad u sheegno in Google uu jacayl u qabo RWD, waxaan garan karnaa xiriir adag oo ku saabsan hababka ugu wanaagsan ee RWD. Kadib Boostada Google ku saabsan Naqshadeynta Jawaabta, Jadwalka Wareegga SEO wuxuu daabacay maqaal qeexaya sababaha sababta Google u jecel yahay naqshadeynta jawaabta leh. Saddexda sababood - oo ah waxyaabo aan nuqul la soo saarin, ma jiraan arrimo cinwaanno URL ah, iyo dhibaatooyin dib u habeyn ah - dhammaantood waa qayb ka mid ah arsenal SEO oo xoog leh.
Markuu Google rogrogo, qof walba wuu boodaa. Sidaas oo kale waa naqshadeynta jawaabta leh. Maaddaama Google dhab ahaantii qoray Buugga Ciyaaraha Moobaylka, waxaa macno leh oo keliya in iyaga la siiyo ixtiraam ku habboon moobiilladooda iyo wax soo saarkooda. Maaddaama algorithms ay sii socdaan in lagu dhajiyo dhammaan 2013 iyo wixii ka dambeeya, waxay u badan tahay inaan arki doonno nuuxnuuxsiyo badan oo bogagga si guul leh u shaqeynaya naqshadeynta jawaabta.
Haddii Google doorbido naqshad wax ku ool ah, taasi waa wax weyn oo beddelashada ciyaarta raadinta.
2. Isticmaalayaasha moobiilku waxay aad u jecelyihiin khibrad wanaagsan, bogagga jawaabta bixiyana waxay u soo bandhigaan tayada bogagga kuwa isticmaala mobilada.
Qodobka kor ku xusan waa xoogaa isku dhafan. Si kastaba ha noqotee, waa qodob muhiim u ah SEO. Waa tan sida ay u shaqeyso.
Aad iyo aad u badan oo isticmaala waa mobile. Websaydhkaagu wuxuu hadda helayaa booqdayaal badan oo mobilo ah oo aan horay loo arag. I aamin; hubi ah Analytics. Dhamaan kuwa isticmaala mobilada waxay u baahan yihiin khibrad wanaagsan. Markasta oo ay sii fiicnaato waaya-aragnimadooda, ayaa ka sii wanaagsan SEO-gaaga. Waa tan sababta.
Tayada goobta waa qodob muhiim ah oo SEO ah. Heerarka sare u kaca waxay noqon kartaa shaqo joojin weyn oo ka dhan ah tayada goobta. Sida ugufiican ee khibradaada isticmaale, ay usii weynaaneyso qiimahaaga SEO. Marka isticmaaleyaasha moobiilku booqdaan goob aan fiicnayn ama wax ka qaban karin, waxaa suurta gal ah in ay soo kici doonaan, si tartiib tartiib ah hoos ugu dhigaya tayada bartaada. Qodobkan ku saabsan tayada iyo UX waa doodda Kristina Kledzik oo dhan, yaa leh maqaalka Moz wuxuu ka dhigayaa kiiska in goob kasta ay tahay inay sameyso beddelaad wax ku ool ah.
Sida SEO u socoto, tani waa arrinta ugu muhiimsan ee jawaabta leh. Iyaga dood ku saabsan naqshadeynta jawaabta, Magazine Smashing wuxuu yiri, "qiyaasta ugu muhiimsan waa sida ay u shaqeyso degelku adeegsadaha," wuxuuna ku adkeysanayaa in goobaha jawaabta ay muhiim yihiin.
Si aad si fiican ugu adeegto dhagaystayaasha moobiilka sii kordhaya, waa inaad siisaa iyaga khibradaha ay u baahan yihiin. Waa habka kaliya ee lagu ilaaliyo tayada goobta oo aad ku kasbato darajooyin raadin fiican.
3. Bogagga jawaabta leh waxay helayaan tusmeyn wanaagsan, sidaas awgeedna, natiijooyinka raadinta sare.
Thanks to algorithms-ka dareenka leh ee Google iyo astaamaha beddelka, boggaga si sax ah ayaa loogu adeegaa dadka isticmaala moobiilka Si kastaba ha noqotee, boggaga jawaabta leh ayaa ah xulashada ugu fiican ee nadiifinta, dhaqsaha leh, iyo habka saxitaanka saxda ah.
Nidaamyada tusmeynta Google waxay umuuqataa inay doorbidayaan bogag shaqaaleeya habka nadiifka ah ee jawaabta leh, kuwa "goobaha u adeega dhammaan aaladaha isla URL-yada, URL kasta wuxuu u adeegayaa isla HTML dhammaan aaladaha iyadoo la adeegsanayo CSS kaliya si loo beddelo sida bogga loogu bixiyay qalab. ” Tani waa qayb ka mid ah Tilmaamaha Google si "loo dhiso degellada casriga ah ee casriga ah," taas oo aad asal ahaan u turjumi karto "bogagga internetka ee mashiinka wax lagu raadiyo." Waxaa intaa dheer, waxay si cad u sheegaan, "tani waa qaabeynta Google ee lagu taliyay."
Haddii aad rabto inaad boggaaga ku muujiso Google sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan, waxaad sidoo kale u qaadan kartaa ereyadooda ku saabsan arrinta: isticmaal naqshad jawaab celin ah. Raac talooyinkooda, iyaguna waxay kula dhaqmi doonaan sida saxda ah markay timaaddo liis garaynta iyo qiimeynta raadinta.
4. Mawduucyada iyo meelaynta mawduucyadu way ka muhiimsan yihiin sidii hore.
Naqshadeynta jawaabta waxay ku saabsan tahay jarista dufanka badan ee ka socda degel. In kastoo “dufan goynta” ay khatar tahay, in kastoo. Waa inaad ka taxaddartaa inaadan jarin SEO-ga inta aad goyneyso ama xoqeyso.
Si loo ilaaliyo qiimaha SEO-ga bogga, dhammaan waxyaabaha ku habboon waa in loo riixaa xagga sare ee bogga. Sababta? Si loo ilaaliyo qiimaha ugu sarreeya ee SEO, barta waa inay lahaato waxyaabo ka sarreeya-isku laablaab labada nooc ee mobilada iyo desktop-ka. Mashiinnada raadinta waxay qiimeeyaan meelaynta waxyaabaha sidoo kale waxa ku jira laftiisa. Jagadu waa muhiim.
Qaar badan oo naqshadeeyayaasha waxqabadka leh iyo horumariyeyaashu waxay jecel yihiin sawir gacmeedyada, sliders, iyo menus-hogging menus xagga sare ee bogga. Qalalaasaha noocan oo kale ah wuxuu dhibaato ku keeni karaa SEO. In badan oo ka mid ah boggaggu waxay doorbidayaan yaraanta iyo fududaanta boggaga content-ka kexeeyey. Awwwards waxay ku qeexday "waxyaabaha ugu horreeya" inay tahay isbeddellada naqshadeynta websaydhka koowaad ee sannadka 2013. Waxay macno saafi ah u leedahay SEO, UX, RWD, CRO (iyo wixii ku saabsan wixii kale ee gaabin ah ee aad rabto inaad halkaas ku tuurto). Si loo ilaaliyo waxyaabaha markabka u qaabeysan, u soo qaado waxyaabahaas qaaliga ah ee jecel SEO-jecel dusha sare ee bogga.
5. URL-yada mobilada, halkii laga heli lahaa goob jawaab celin ah, wali waa ikhtiyaar SEO.
In kasta oo degdegga faafa uu u socdo RWD, qaar ka mid ah xirfadleyda ayaa wali u doodaya habka mobilka moobiilka. Bryson Meunier wuxuu kiisa ku cadeeyay kiisa Maqaalka Search Engine Land: “Naqshadeynta Webka jawaabta leh wali waxay umuuqataa inay leedahay sumcad aan loo qalmin inay tahay xulashada ugu fiican SEO. Dhab ahaan, URL-yada mobilada waayeen noqo dookha ugu fiican ee SEO. ”
Haa, taasi waa qurux badan oo dirxi ah. [Gali khubarada ku dhawaaqaysa booska ay doorbidayaan.] Mahadsanid, Google hadda wuu kala duwanaan karaa noocyada bogga. Marka, ku-adkaysiga hal-URL ee ujeeddooyinka SEO-ga ah waa mid aan dood lahayn, iyada oo ay ugu wacan tahay soo bandhigida astaamaha beddelashada.
Meunier wuxuu kiiska ka dhigayaa in dadka isticmaala mobilada ay raadinayaan si kala duwan waxayna raadinayaan macluumaad kala duwan, oo ka duwan kuwa isticmaala desktop-ka. (Waan ka shakisanahay.) Sidaa darteed, ayuu yidhi, waxaa sida ugu fiican ugu adeegi kara goob loo sameeyay si gaar ah iyaga iyo baahidooda - yacni goob si firfircoon loogu adeego. Intaa waxaa sii dheer, Meunier wuxuu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay aag mobilo gaar ah marka laga eego dhinaca xawaaraha goobta iyo UXD, isaga oo mar labaad xoojinaya dhagaystayaasha kala duwan ee suuqa moobiilka.
Go'aaminta qiimaha SEO ee naqshadeynta jawaabta waxay kuxirantahay dhagaystayaasha qofka. In kasta oo RWD si joogto ah loo buunbuuniyo oo si ballaadhan loogu ammaano SEO Holy Grail, shirkadaha qaar ayaa laga yaabaa inay doortaan istiraatiijiyad SEO ah oo ku lug leh URL-yada mobilada halkii ay si adag uga jawaabi lahaayeen. Sida caadiga ah horay u socoshada, si kastaba ha noqotee, xalka jawaabta ayaa u muuqda mid ku habboon awoodda SEO. Si kastaba ha noqotee, haysashada awoodda taariikh ahaaneed ee URL-kaaga asalka ah, fududaynta habkaaga, iyo hagaajinta maareynta maadooyinkaaga waa dhammaan hababka ugu wanaagsan ee SEO ee qayb ka ah xirmada naqshadeynta jawaabta.
Qof kastaa wuu fahamsan yahay in SEO uu yahay goob si joogto ah u beddeleysa. Macluumaad cusub iyo mararka qaarkood macluumaad is burinaya ayaa la daabacayaa saacaddiiba. Qofna kama nixin in nashqadeynta jawaabta ay beddeleyso SEO. Layaabka dhabta ah ayaa laga yaabaa inuu ku yimaado sida ay muhiimka u yihiin isbeddelada noocan oo kale ah. Si run ahaantii loogu guuleysto raadinta, bogagga waa inay la kulmaan kacdoonka jawaabta, oo ay sameeyaan waxa ay u baahan tahay si ay uga dhigaan isbeddelka jawaabta.
Tags: Naqshad wax ku ool ahSEO
Wareysiga Naadiga Cunnada: Dhisidda Summad Bulsheed
Jun 23, 2013 saacadu markay ahayd 8:05 AM
Runtii maqaal wanaagsan iyo tixraacyo si fiican loo taageeray. Ma aanan ogeyn in Google ay taageero badan u hayso RWD.
Jul 18, 2013 markay ahayd 3:07 AM
Maqaal Aad u Macluumaad badan, ayaa ku hayn doona dhammaan qodobbadan maskaxdayda inta aan samaynayo degel. Mahadsanid
4, 2013 at 3: 12 AM
Runtii maqaal wanaagsan: D
Aug 6, 2014 at 2: 35 AM
Jul 13, 2015 markay tahay 11:50 PM
Ku soo dhowaaday qodobkan dhowaan laakiin weli waa faa'iido. Ugu dambayntii waxaan go aansaday inaan boggaggayga u dhiso si jawaab celin leh, sifiicanna way u shaqaysaa! Gaar ahaan kadib cusbooneysiinta SEO-ga wareega ee Google sanadkan.